Tsy nihazona na inona na inona
« Fa masoandro sy Ampinga Jehovah Andriamanitra ; fahasoavana sy voninahitra no homen’i Jehovah ; tsy hiaro zava-tsoa amin’izay mandeha amin’ny fahitsiana izy. » Sal. 84 :11
Izay tsy niaro ny Zananilahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra ? Rôm. 8 :32 ? Aoka isika hankasitraka ny sorona lehibe izay nataon’Andriamanitra ho antsika. Tsy hisy instony fotoana izay tokony handraisantsika tsara ireo fanomezan’ny fahasoavany ankoatra ny anio. Nanolotra ny ainy ho an’ny olona i Kristy, mba hahafantaran’izy ireo ny haben’ny fitiavany azy ireo. Tsy maniry na iza na iza ho very Izy, fa mangetaheta ny hahita ny rehetra ho amin’ny fibebahana. Izay rehetra maniry ny hampilefitra ny sitrapo eo Aminy dia afaka hanana ny fiainana izay mifanahaka amin’ny an’Andriamanitra. Nilatsaka teo Aminy ny sabatry ny fahamarinana mba handehanan’izy ireo amin’ny fahafahana. Maty Izy mba hahavelona azy ireo.
Mila mijoro tsy azo hozongozonina amin’ireo fitsipiky ny Tenin’Andriamanitra isika, mhatsiaro fa miaraka amintsika hanome hery mba hiatrehana fanandramana vaovao Andriamanitra. Aoka isika hihazona hatrany ireo fitsipiky ny fahamarinana eo amin’ny fiainantsika, mba handrosoantsika avy amin’ny hery ho amin’ny hery amin’ny anaran’ny Tompo. Tokony hankamamiantsika ho toy ny tena sarobidy ny asa izay ampandrosoin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vahoakany mpitandrina ny lalàny, ary izany, amin’ny alalan’ny herin’ny fahasoavany, dia hihamantanjaka sy hahomby kokoa arakaraka ny fandrosoan’ny fotoana. Mikatsaka hahasemban-drahona ny fahaiza-manavaky ny olon’Andriamanitra ny fahavalo, ary hampahaosa ny fahombiazan’izy ireo ; saingy raha maniry ny hiasa mafy araka izay fitarihan’ny fanahin’Andriamanitra izy ireo, dia hanokatra varavarana azo hararaotina Izy ho amin’ny asa fanorenana ireo toerana tranainy nampiasaina tamin’ny fandanilaniam-poana. Ny fanandraman’izy ireo dia ho iray amin’ireo fitomboana mitohy amin’ny fahatokiana sy ny hery mandra-piavin’ny Tompo hidina avy any an-danitra miaraka amin’ny hery sy ny voninahitra lehibe mba hanisy ny tombokasen’ny fandresena farany eo amin’ireo izay mahatokiny.
Maniry ny hahita ny asan’ny hafatry ny anjely fahatelo handroso amin’ny fahombiazana mitombo hatrany ny Tompo. Tahaka ny niasany nandritra ny taona rehetra mba hanome faherezana sy hery ho an’ny vahoakany, dia amin’izao taona izao koa no aniriany hitarika ho amin’ny fahatanterahana miezinezina ny tanjony ho an’ny fiangonany. Mangataka ireo Masina mba hiara-mandroso amin’ny firaisana Izy, mandeha avy amin’ny hery ho amin’ny hery lehibe kokoa, avy amin’ny finoana ho amin’ny finoana mitombo ao amin’ny fahamarinana sy ny fahitsiana noho ny Aminy.